BAL EEG: Rikoodhka gooldhalineed ee cajiibka ah uu Lionel Messi ku leeyahay kooxda Eibar, kahor kulanka habeen dambe – Gool FM
(La Liga) 12 Jan 2019. Kooxda Barcelona ayaa dooneysa inay sii dheereysato hogaanka horyaalka La Liga ee dalka Spain, kadib kulankooda 19-aad ee xili ciyaareedkan ay habeen dambe ku soo dhaweyn doonaan kooxda Eibar.
Lionel Messi ayaa ku soo bilaaban doona kulankan sida la filayo, kadib markii uu seegay kulankii lasoo dhaafay ay kooxda Levante kula ciyaareen Copa del Rey.
Lionel Messi ayaa hogaaminaya haatan gooldhalinta horyaalka La Liga wuxuuna soo dhaliyay 16 gool, isagoo 4 gool ka sareeya saaxiibkiis Luis Suarez, xili sidoo kale uu hogaaminayo loolanka abaal marinta kabta dahabka ee loo caleymo saaro gooldhaliiyaha ugu sareeya 5-ta horyaal ugu waaweyn qaarada yurub.
Messi ayaa RIKOODH cabsi ah ku yeeshay kooxda Eibar sanadihii lasoo dhaafay, wuxuu ka hor yimid 7 kulan oo kaliya ee dhamaantood ah horyaalka La Liga, hadana sidaas oo ay tahay wuxuu kaga dhaliyay 12 gool, wuxuuna sidoo kale ku caawiyay 2 gool kale, taasoo ka dhigan inuu ku lug yeeshay 14 gool ay kooxda Barcelona ka dhalisay dhigeeda Eibar.
Lionel Messi ayaa goolal ka dhaliyay kooxda Eibar dhamaan kulamadii uu kahor yimid tan iyo markii ay u soo dalaceen heerka koowaad ee horyaalka xili ciyaareedkii 2014-2015, marka laga reebo hal kulan oo kaliya, taasoo ahayd lugta labaad kulamada horyaalka ee xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, laakiin kulankaas wuxuu caawiyay gool, wuxuuna kooxdiisa Barcelona ku hogaamiyay inay guul ku gaaraan 2-0.
RIKOODHKA cajiibka ah ee Lionel Messi uu ku leeyahay kooxda Eibar ayaa ah inuu guul ka wada gaaray dhamaan 7-da kulan uu kaga hor yimid kooxda Barcelona, mana uusan kala kulmin wax guuldaro ama barbaro ah.
Dhinaca kale Messi ayaa 6 gool kaga dhaliyay kooxda Eibar 3 kulan uu kaga hor yimid garoonka Cump Nou, oo sidoo kale kulanka habeen dambe marti galin doono, iyadoo sidoo kale ay xusid mudan tahay in xili ciyaareedkii lasoo dhaafay uu kaga dhaliyay isla garoonkan goolasha loo yaqaan super hat-trick ama 4 gool.